Singapasi nje sesi siNgesi – Grocott's Mail
You are at:Home»Uncategorized»Singapasi nje sesi siNgesi
Singapasi nje sesi siNgesi
By _Gr0cCc0Tts_ September 26, 2016 1 Comment5 Mins Read
Ukusetyenziswa kwesiNgesi njengolwimi lokufunda nokufundisa kwizikolo zoMzantsi Afrika ngomnye woonobangela bokuba abafundi batshone okanye baphume ngekhefu esikolweni.
Oku kungokuba abafundi basuka emakhaya besazi ulwimi lwabo lwenkobe yaye bexhobe ngokwaneleyo ngezinto ezihambelana nenkcubeko yabo kodwa xa befika esikolweni inkcubeko yabo ayithathelwa ngqalelo. Kuye kufuneke ukuba baqale phantsi bafunde ulwimi olutsha, isiNgesi kuba phantse zonke izifundo zabo zifundiswa ngolu lwimi. Neemviwo zabo bazibhala ngesiNgesi, lwimi olo abangaluqondiyo kakuhle.
Ewe, kuhle yaye kubalulekile ukufunda ulwimi olutsha kodwa akufanelanga ukuba abanye abantwana bangafikeleli kwimfundo ngenxa yokuba iziswa kubo ngolwimi abangaluqondi kakuhle.
Loo nto ifana nokunika ixhego elingenamazinyo iinkobe kuba usazi kakuhle ukuba alinokwazi ukuzihlafuna. Ukuze utye iinkobe udinga amazinyo kanye ngokufanayo nokuba ukuze ufumane imfundo, kufuneka uqonde ulwimi olo iza ngalo.
Xa ke ufundiswa inzulu-lwazi ngesiNgesi ongasivayo ucinga ukuba uya kuphuma esikolweni unolwazi olululo ngesi sifundo?
Okokuqala, into yokufundiswa ngesiNgesi esikolweni ithetha ukuba nolwazi oluninzi oza kulufumana luvela kwinkcubeko yamaNgesi. Eyakho inkcubeko njengomXhosa, umZulu okanye uMsuthu, umzekelo ayibandakanywa kwezi zinto ufunda ngazo.
Loo nto ifika ithini kuwe njengomfundi ontsundu, othetha ulwimi lwesiNtu njengolwimi lwakho lwenkobe? Ithetha ukuba inkcubeko yakho ayibalulekanga kangako ukuba ingade ifundwe esikolweni. Xa inkcubeko yakho ingabalulekanga kangako, loo nto ithetha ukuthini ngawe? Ithetha ukuba nawe awubalulekanga!
Njengokuba inxenye enkulu yoluntu loMzantsi Afrika ingabantu abantsundu yaye isiNgesi ingelolwimi lwabo lwasekhaya, bekungafanelanga ukuba noko iilwimi zaba bantu neenkcubeko zabo zinikwa imbeko ezifaneleyo kwimfundo eMzantsi Afrika? Bathini bona amasemagunyeni?
Kaloku xa kuthethwa ngokusetyenziswa kweelwimi zesiNtu njengeelwimi zokufunda nokufundisa kweli uya kuva abantu besithi “Hayi, ezi lwimi aziphuhlanga ngokwaneleyo yaye azinawo amagama abhekisele kwezenzulu-lwazi, imatematika nezinye izifundo ngoko ke akunokulunga kufundiswe ngazo”. Ebeza kuvela njani ke loo magama xa iilwimi zesiNtu zingasetyenziswa kwimfundo nakwimimmandla yenzulu-lwazi kanjalo?
Abanye bathi isiNgesi lolona lwimi olusele lusaziwa kuMzantsi Afrika uphela yaye abantu abathetha iilwimi ezahlukeneyo basebenzisa isiNgesi ukuze banxibelelane kakuhle.
Ewe khona kunjalo kodwa nithini ke ngenxenye yabantu bakuthi aba bangasaziyo isiNgesi, abanye besisebenzisela nje ukucela iswekile emlungwini? Nithini ngenkqubela-phambili yabo xa phantse zonke iinkonzo zoluntu kweli lizwe zisiziswa ngesiNgesi?
Baza kuphuhla njani kwezoshishino xa olona lwimi lusetyenziswayo kulo mmandla isisiNgesi? Khona, nithini ngabantwana babo aba bagqibela ukuthetha isiNgesi esikolweni ze xa befika emakhaya bathethe iilwimi zabo zenkobe? Banetyala bona?
Nangona isiNgesi sifundwa ezikolweni, loo nto ayithethi ukuba abafundi bavele basiqonde kwangoko. Abanye basokola ukuluthetha nokulubhala olu lwimi bade bayokuphuma kwimatriki kuba indlela olufundiswa ngayo, phakathi kweminye imiba, ayibancedisi nganto.
Nditsho nootishala imbala bayasokoka ukucacisa imixholo yezifundo zematematika, inzulu-lwazi, ezembali nezinye izifundo ngesiNgesi nangona olu lwimi lubekwe kumgaqo-nkqubo weelwimi kwimfundo weli njengolwimi lokufunda nokufundisa.
Umgaqo-nkqubo weelwimi kwimfundo waseMzantsi Afrika uthi wonke ubani unelungelo lokufunda ngolwimi azikhethela lona. Kwalo mgaqo-nkqubo mnye uphinda ugunyazise ukusetyenziswa kwesiNgesi njengolwimi lokufunda nokufundisa ezikolweni. Awuthethi uziphikisa ke xa kunjalo?
Kaloku nokuba bendinothi ndikhetha ukufunda ngesiXhosa, umzekelo, ndibe phofu ndisenza ilungelo lam, loo nto ibingenokulunga kuba zonke izifundo ezenziwa esikolweni (ngaphandle kolwimi lwasekhaya) zingeNgesi.
Yiyo loo nto kufuneka utshintsho luqale lwenziwe phaa kumgaqo-nkqubo, kutshintshwe le ndawo ithi isiNgesi masisetyenziswe njengolona lwimi lokufunda nokufundisa. Endaweni yoko, kunokuthiwa kwisikolo ngasinye, abantwana mabafundiswe ngolwimi lwasekhaya oluthethwa luninzi lwabafundi kweso sikolo.
Umzekelo, kwisikolo esiseRhini esifana neFikizolo Primary School kufundiswe ngesiXhosa zonke izifundo ukususela kwimatematika, inzululwazi, ezembali nazo zonke izifundo ezenziwayo esikolweni ngaphandle kwezifundo zesiNgesi.
IsiNgesi sona ze sifundiswe njengesinye sezifundo zasesikolweni kanye ngale ndlela kwenziwa ngayo ngoku kwiilwimi zesiNtu. Loo nto iza kuqinisekisa ukuba abantwana bafundiswa into abayivayo batsho bapase yaye bakwazi ukuqiqa. Ngaxesha nye, aba bantwana baza kuphuma esikolweni besazi isiNgesi kuba basifundisiwe yaye baza kukwazi ukusebenzisa olu lwimi ukunxibelelana nabanye abantu nokufikelela kwimimmandla ebalulekileyo yoluntu.
Okokugqibela, abaguquli-lwimi abafana nam banoxanduva lokuguqulela imibhalo okanye iincwadi zesikhokhelo eziphambili ukususela kwisiNgesi okanye nesiBhulu ukuya kwiilwimi zesiNtu.
Ababhali beelwimi zesiNtu, kanti nabo basakhasayo nabo banoxanduva lokubhala iincwadi ezininzi zemimmandla eyahlukeneyo ngezi lwimi. Loo nto iza kunceda ukuba ukusetyenziswa kweelwimi zesiNtu ezikolweni kubeyimpumelelo kuba kuza kube kukho iincwadi zesikhokhelo ezaneleyo ezibhalwe ngezi lwimi.
Umba wokunqongophala kwamagama abhekisele kwezenzulu-lwazi, imatematika, ubuchwepheshe neminye imimmandla ingasombululeka kuqala, ngokuthi kuthathwe la magama asetyenziswa ngabafundi kwiingxoxo zabo xa bezama ukuqonda imixholo abafundiswa ngayo kwezi zifundo ze asetyenziswe xa kuguqulelwa naxa kubhalwa iincwadi ezintsha.
Ngapha koko, inzulu-lwazi asiyonto ibhekeleyo kwintlalo yakwaNtu kuba kwamandulo phaya abantu abantsundu babesebenzisa indalo ukwenza phantse yonke into. Sinawo amagama emithi, izityalo neentaka ezininzi.
Siyakwazi ukusebenzisa indalo ukuqaphela ukutshintsha kweesizini neenyanga. Yiyo naloo nto iinyanga ezininzi zathiywa ngendalo esiXhoseni, umzekelo.
Abantu abantsundu babevele bezingela, ngoko ke sinawo amagama abhekisele kwizilwanyana ezininzi. Zazixhelwa ezi zilwanyana phambi kokuba ziphekwe okanye zojiwe.
Loo nto ithetha ukuba sinawo amagama abhekisele kumalungu omzimba ezilwanyana ezininzi. Nawomntu kanti siyawazi. Andithi inzulu-lwazi iphelele kwezi zinto ndizibaluleyo, kodwa nje ndizama ukubonisa ukuba asizi kuqala phantsi xa sisakha isigama salo mmandla kwiilwimi zesiNtu.
Noko siza kuthathela entweni. Ngakwicala lematematika siza kuboleka lawo magama singenawo kwezinye iilwimi eziphuhlileyo zakwilizwekazi iAfrika, iNgesi nezinye iilwimi.
Nanjengoko ubuchwepheshe buqala noko ukuxhaphaka yaye liye lisanda inani labantu abafikelela kwiifowuni/iminxeba, eMzantsi Afrika loo nto ithetha ukuba abantu baza kuzakhela amagama abaza kuwasebenzisa ukubiza izixhobo eziza nobuchwepheshe kwiilwimi zabo.
Isigama seelwimi zesiNtu singakhula xa abantu abathetha ezi lwimi bezimisele ukusikhulisa. Ngapha koko, bakhona abantu abaqeshelwe ukwenza kanye lo msebenzi wokwakha isigama ngurhulumente weli. Kuyacaca nje qha ukuba usemninzi umsebenzi ekufuneka bewenzile.
Phofu ke, umsebenzi wokuphuhlisa iilwimi zesiNtu kwimfundo, umzekelo, asiloxanduva lukarhulumente kuphela.
Koko, luxanduva lwakhe nabani na onqwenela ukubona isizwe sakuthi sikhula yaye abantu abantsundu bangavalelwa ngaphandle kwamathuba anokuthi abaphuhlise.
Previous ArticleStudents reject fees cap
Next Article St Andrew’s beat Makana Spears